Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. रौतहट बम काण्ड : १५ एसपी जसले न्यायको गुहार सुनेनन् – Emountain TV
काठमाडौं, २ कात्तिक । बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई सुई लगाई बेहोस बनाएर जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर सामूहिक हत्या गरिएयता १२ वर्षमा रौतहटमा प्रहरी प्रमुखका रूपमा १६ जना एसपी पुगेका छन् । घटनालगत्तै प्रहरीले उजुरी लिनसमेत मानेन । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा अगाडि बढाउन नमानेपछि पीडित परिवार सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले घटनालाई गम्भीर भन्दै थप अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । तर, पटकपटक ताकेता गर्दा पनि प्रहरी हाकिम सर्वोच्चको आदेशको सम्मान होइन, आलमको संरक्षणमा लागिरहे ।
न्यौपानेपछि जयबहादुर चन्द रौतहट प्रहरी प्रमुखका रूपमा सरुवा भएर आए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्न नमानेपछि पीडितहरू महान्यायाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौं आएका थिए । घटनामा आफ्नो कुनै गल्ती नभएको र पत्रिका पढेर मात्र आफूले त्यसबारे थाहा पाएको चन्दको दाबी छ ।
चन्दपछि घनानन्द भट्ट रौतहटको प्रहरी प्रमुख भए । २९ कात्तिक ०६५ देखि ३ मंसिर ०६६ सम्म उनी रौतहटमा थिए । उनको कार्यकालमा पनि आलमलाई प्रहरी संरक्षण प्राप्त भयो । त्यसवेला त झन् आलम नै मन्त्री भएका थिए ।